Bishnu Sharma: February 2013
२७ फेव्रुअरी, २०१३
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो विज्ञप्ती आएपछि पुनः राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लिएर जनमत विभाजित छ । नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनको तयारीमा छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक भएपछि प्रमुख चार दल बाधा अड्काउ फुकाउने गृहकार्यमा छन् । कार्यकारी प्रमुख बन्न रेग्मीसँग यस्ता थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् जसलाई निमिट्यान्न नपारी रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् । अहिलेको राजनीतिको गाँठो फुकाउने दुई विकल्प मात्र छन् –बाबुराम भट्टराईकै सरकारले चुनाव गराउनु र प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको टेक्नोक्र्याट सरकार । तीन प्रमुख गतिरोध छन् जसलाई तह लगाउन सके भने मात्र रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 11:10 PM No comments:
एउटा भनाई छ –‘निराशावादीले प्यारासुट बनाउँछ र आशावादीले प्लेन ।’ तर, चिरन्जीवि आचार्य यतिबेला त्यही आशावादिताको प्लेनमा सयर गरिरहेका छन् । सपना र आशा पुरा गर्ने यात्रामा अन्य प्राथमिकताहरू गौण हुन्छन् । यसको अर्थ चिरन्जीविसँग डाक्टर, पाइलट र इन्जिनियर बन्ने सपनाहरू कहिल्यै प्राथमिकताका चीज बनेनन्, जति राजेश हमालको सहयोगी बन्नुमा उनका मान्यता दरिए । हामी यहाँ कुरा गरिरहेका छौं –उनै चिरन्जीविसँग जो झट्ट देख्दा दुब्ला र पातला देखिन्छन् तर दुब्लो छैन उनको आत्मविश्वास । कमैलाई थाहा छ –राजेश हमाल महानायक बन्नुको नेपथ्यमा यी दुब्ला र खिरिला चिरन्जीविको योगदान उच्च छ भनेर । सुनसरीका यी रैथाने हालैको एक साँझ पुरानो बानेश्वरमा नोस्टाल्जिक बने ।
Posted by Sharma Bishnu at 5:02 AM No comments:
Posted by Sharma Bishnu at 11:41 PM No comments:
अक्सर कसैलाई सल्लाह दिँदा हामी सगरमाथा विम्व प्रयोग गर्छौं । एभरेस्टलाई विजय र लक्ष्य प्राप्तीको विम्वका रुपमा लिइन्छ । हजारौंले त्यही सगरमाथा चढ्दा हिऊँसँग जीवन साटेका छन् । गत आइतबार भने २९ वर्षिया नेपाली युवती छुरिमले एकै सिजनमा दुईपटक सर्वोच्च शिखर चढेर गिनिज बुकमा नाम लेखेकी छिन् । विश्व रेकर्डलाई मात्र गिनिजले नाम लेखाउने गर्छ । पर्यटन मन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले छुरिमलाई गिनिज सर्टिफिकेट हस्तान्तरण गरे । गत मे १२ मा छुरिम ८८४८ मिटर अग्लो हिमाल चढेकी थिइन् । केही समय आधार शिविरमा झरेर आराम गरिन् अनि पुनः उक्लिइन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 10:59 PM No comments:
२५ फेव्रुअरी, २०१३
यसपटक ओस्कर अवार्ड फिल्मले मात्र चर्चित रहेन, रेडकार्पेट फेसन पनि मुख्य रह्यो । रातो कार्पेटमा हलिउड सेलिव्रेटी आकर्षक पहिरनमा पोज दिन व्यस्त रहे । यस्तो लाग्थ्यो –फेसनको थिचाइमा ओस्कर पीडा खेपिरहेछ । यसपटकको अवार्डमा रेडकार्पेट सेसन बेग्लै राखिएको थियो । आधा घन्टाको रेडकार्पेट सेसनमा सहभागि हुन सेलिव्रेटी पहिल्यै डल्बी थिएटरमा पुगेका थिए । ओस्करको रेडकार्पेटले विश्वकै फेसन डिजाइनिङलाई प्रभाव पार्छ । यसकारण सेलिव्रेटी आकर्षक परिधानमा देखिन मरिहत्ते गर्छन् । यसपटक जेनिफर लरेन्सलाई फेसन क्रिटिक्सले आकर्षक फेसन आइकन माने । एडेल, एना हाथवे, क्रिस्टना चेस्टेन पनि सजिएर पुगेका थिए । डेनियल डे लेविस, ब्राडली कुपरको फेसनले पनि धेरैको मन जित्यो । ओस्कर रेडकार्पेटलाई संक्षिप्तमा हेर्न भित्र जानुस् । तस्विरहरू : इन्डियन एक्सप्रेस
Posted by Sharma Bishnu at 1:14 AM No comments:
अन्ततः मेरो प्रेडिक्सन मिल्यो र ‘अर्गो’ले यसवर्षको ओस्कर (एकेडेमी) अवार्ड जित्यो । सर्वोत्कृष्ट फिल्म बनेको ‘अर्गो’ले इरानमा अपहरणमा परेका ६ अमेरिकीको उद्दारको कथा भन्छ । वार्नर ब्रोको यो फिल्म इरानमाथिको कथामा ओस्कर अवार्ड जित्ने दोस्रो फिल्म हो । मुस्लिम आणविक राष्ट्र इरानमाथि पश्चिमले इम्बार्गो लगाइरहँदा त्यहीँ माथि बनेको फिल्मले अवार्ड जित्नुलाई अमेरिकी परराष्ट्र नीतिको जितका रुपमा पनि हेरिएको छ । इरानलाई गिराउन राष्ट्रसंघिय च्यानलबाट नसकेपछि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन कस्सिएको अमेरिकाले ‘अर्गो’मार्फत इरानी सुरक्षाको धन्जी उडाएको छ । ‘अर्गो’को जितमाथि इरानले प्रतिक्रिया जनाउला कि भनेर मध्यपूर्वमा यतिबेला चासो बढेको छ । इरानमाथिको फिल्मलाई जिताएर वासिङ्टनले अप्रत्यक्ष रुपमा बेइजिङमाथि पनि दवाव सिर्जना गरेको हुनसक्छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:15 AM No comments:
A local woman worked onahistoric mural. Image : NY Times
फेव्रअरी २४, २०१३
यस्तो लाग्छ –न्यूयोर्क टाइम्सले लोमान्थाङलाई खेदेको खेदै छ । यो वर्षमात्र संसारकै प्रतिष्ठित पत्रिकाले उपल्लो मुस्ताङको समाचारमात्र ६ पटकभन्दा बढी चोटी छापिसक्यो । तस्विर त दुईदर्जन पुगिसक्यो होला । बरु, काठमाडौंको समाचारलाई यो अखबारले उत्ति महत्व दिएको छैन । यसका आफ्नै स्वार्थ, बाध्यता र कारण पनि छन् । अन्तराष्ट्रिय रुपमा नेपालको एकमात्र न्यूज मेकर ठाउँ कतै छ भने त्यो हो –लोमान्थाङ । शनिबार पनि न्यूयोर्क टाइम्सले लोमान्थाङको अर्को एक समाचार छाप्यो –तिब्बतीका कला मुस्ताङमा कोरिँदैछन् र कसरी कला चोरिएका छन् भन्ने बारे । यो अमेरिकी पत्रिकाको यस्तो फलोअप बुझ्न मुस्ताङ–चीन सीमामा खम्पा अप्रेसनबारे बुझ्नुपर्छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 11:37 PM No comments:
ताजा विवरणअनुसार प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले आफूलार्ई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरूको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् । अन्ततः न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको प्रयास भत्किएको छ । रेग्मीले अनिच्छा देखाएपछि सहमति हुन पाएन । यसले सबैभन्दा बढी फाइदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै भएको छ अनि मधेशी मोर्चालाई । सुशिल कोइरालको नाममा तीन महिना, प्रधानन्यायाधीशको नाममा एक महिना समय लम्बियो । अब कसको नाम आउने ? उसैको नाममा तीन महिना समय लम्बिनेछ । किनकी अब आउँदो मंसिर यता चुनाव हुने सम्भावना छैन । आउँदो बैशाखसम्म नयाँ नेतृत्वमा सहमति हुनेछैन ।
Posted by Sharma Bishnu at 10:28 PM No comments:
संगीतश्रोता, मेरा मित्र तथा मनपर्ने कवि हुन् । मेरै छिमेकी पर्वतका यी हितैषी यतिबेला पत्रकार महासंघ पर्वतका जिल्ला सभापति छन् । शक्तिशाली स्टोरी टेलिङका कारण संगीतश्रोताका कवितामा मन छुने भावहरू हुन्छन् । ‘किरेडाँडा’ उनको कविताको अब्बल विम्व हो । यस्तो लाग्छ –किरेडाँडा उनको साहित्यिक ट्रेडमार्क हो । समकालिन पुस्तामा संगीतश्रोता बलिया युवा कवि हुन् । ‘म काठमाडौं आइपुगेँ कमरेड’ कविता पढेर म मर्मस्पर्शी बनेको थिएँ । यतिबेला उनीद्धारा लिखित कविता संग्रह ‘म काठमाडौं आइपुगेँ’ प्रकाशनको तयारीमा छ । उनको यो कवितात्मक भावलाई राष्ट्रिय राजनीतिको गहिराइसँग बुझ्नु न्यायोचित हुनेछ । प्रकाशोन्मुख पुस्तकबाट मैले उनको एउटा कविता यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।
Posted by Sharma Bishnu at 9:38 PM 1 comment:
२३ फेव्रुअरी, २०१३
पारस शाहको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर जसरी सामाजिक संजालका भित्ताहरू भरिए –यसले इन्टरनेट उपयोगिताको हाम्रो बेथितीलाई पुष्टि गर्छ । पुनः एकपटक ‘सामाजिक संजाल माध्यम मात्र हो, समाचार होइन’ भन्ने पछिल्लो बहसमा बल थपिदिएको छ । कुनैपनि व्यक्तिको स्वास्थ्यलाई लिएर यसरी व्यंग्य गर्नु र उनलाई अपमानको पराकाष्टामा पुर्‍याउनु गलत हो । प्रचण्डपुत्र प्रकाशले जिउँदै रहेको व्यक्तिलाई श्रद्धाञ्जली दिएर गलत प्रवृत्तिलाई मलजल गरेका छन् । भलै, पारस शाह सामन्तवादको केन्द्रविन्दु दरबारका एक पात्र होलान् तर भिन्न राजनीतिक परिवेशको यो छेकोमा उनलाई आम नागरिककै रुपमा लिइनुपर्छ । मेरै कतिपय मित्रहरूले पारसको मृत्युको हल्लामा स्टाटस लेखे र ट्वीटिए । तर, ती सबै खबरको विश्वसनिय स्रोत थिएन । हाँसो लाग्दो कुरो –स्रोतका रुपमा प्रकाश दाहालको नाम उल्लेख थियो ।
Posted by Sharma Bishnu at 3:41 AM No comments:
के बिना कुनै इन्ट्रेस्ट समाचार बन्ने गर्छ ? पैसा, सत्ता, शक्ति र कर्पोरेटले कसरी समाचार कक्षलाई प्रभावित पार्छन् ? दक्षिण एसियामा सम्पादकीय स्वतन्त्रता कस्तो छ ? प्रकाशकको नियन्त्रणमा कसरी सम्पादक र पत्रकारले समाचार प्रवाह गर्छन् ? यी सबै प्रश्नको समग्र उत्तर मैले शनिबार हेरेको चर्चित भारतीय डकुमेन्ट्री ‘ब्रोकरिङ न्यूज : मिडिया, मनी र मिडलम्यान’बाट पाएँ । उमेश अग्रवाल निर्देशित ५५ मिनेट यो लामो वृत्तचित्र हेर्दा यस्तो लाग्छ, भारतीय जराबाट हुर्किएको नेपाली पत्रकारिता पनि यसबाट ग्रसित छ । भलै, यसको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित भएपनि यसले भारतीय राजनीति, बलिउड, क्रिकेट, कर्पोरेटसँग मिडियाको सम्बन्धलाई नाङ्गेझार पारेको छ । त्यसैले होला वृत्तचित्र हेरिसकेपछि लेखक हरि रोका यसलाई नेपाली पत्रकारितासँग गाँस्दै थिए ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:54 AM No comments:
म राजनीतिक प्राणी पनि हुँ तर मेरो यो साता फिल्मी काममै बित्यो । विहिबारदेखि सुरु भएको ‘हुमन राइट्स फिल्म फेस्टिभल’ र शुक्रबार रिलिज भएको ‘छड्के’को मूल्यांकन र समिक्षाले सप्ताहन्त बित्यो । तर, फिल्म फेस्टिभलमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले जंगी शैलीमा दिएको अभिव्यक्तिले भने मेरो मन स्ट्राइक गरेको छ । पछिल्लो समय चर्चित फिल्म ‘बधशाला–सेना’ विवादमा पहिलोपटक उपाध्यायले यसरी सार्वजनिक बोली बोलेका थिए । उनी भन्दै थिए –‘उहाँहरू (निर्माणपक्ष)ले पोशाक युज नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, यति सानो कुरामा पनि उहाँहरुले हंगामा मच्चाउनुभयो । नयाँ परिवेशमा नयाँ पोशाकै प्रयोग गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
Posted by Sharma Bishnu at 1:49 AM No comments:
Posted by Sharma Bishnu at 12:19 AM No comments:
२० फेव्रुअरी, २०१३
कतिपय न्यूज–इस्यु बाजा बजाएर आउँदा रहेनछन् । यस्तै भयो, दक्षिण कोरियाली चर्चित पपगायिका बेइक जी योङको काठमाण्डू कन्सर्ट । ललितपुरको झम्सिखेलमा यी मंगोलियन डिभाले मंगलबार बेलुका सट्याक–सट्युक कन्सर्ट गरिन् । नेपालमै एउटा विद्यालय खोल्न योङले यस्तो कन्सर्ट गरेकी हुन् । कन्सर्टबाट संकलित रकमले विद्यालय खोल्ने तयारीमा जुटेकी छिन् उनी । कोरियाली नेट टेलिभिजनले योङको कन्सर्ट प्रसारण गरेको थियो । जहाँ उनले कोरियाली भाषामै गीत गाएकी छ्नि र सबैलाई मख्ख पारेकी छिन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 2:47 AM No comments:
बुढापाका भन्छन् –‘मुस्ताङमा प्लेनले लामखुट्टे ल्याएको हो ।’ यो भनाइमा कत्तिको सत्यता छ थाहा छैन, टाउको दुखाउने जिम्मा वैज्ञानिकलाई दिउँ तर केही यस्ता अचम्मलाग्दा कुरा चाहिँ हिमालपारिको यो थलोमा भैरहेका छन् । लामखुट्टे बढ्नु, लोमान्थाङमा स्याउ फल्नु, पानी पर्न थाल्नु, जोमसोममा स्याल समेत पाइनु, माटाका घर भत्किन थाल्नु –यी सबै कुराको पछाडि मैले जलवायु परिवर्तनको असर देखेको छु । केही साताअघि अपर–मुस्ताङमा जलवायु शरणार्थी समस्या देखिएको कुरामा ब्लग लेखेको थिएँ । तर, केही सातादेखिको लगातारको हिमपातले यो भोटमा पार्नु समस्या पारेको छ । आखिर हिउँ जिन्दगी नै हो ।
महावीर पुनलाई म बाँकी नेपाललाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने अभियन्ताको रुपमा लिन्छु र चिन्छु । म्यागासेसे बिजेता उनै महावीरले बनाएको उत्तर म्याग्दी यतिबेला टेक्नोलोजी पण्डितहरूको तीर्थस्थलजस्तै बनेको छ । काम गर्दै जाने र फलको आशा नगर्ने पुनको निस्वार्थ लगनशिलताबाट तन्नेरीपुस्ताले सिक्नुपर्ने धेरै छन् । म यतिबेला छक्क छु, कार्यकारी प्रमुख बाबुराम भट्टराईले इनोभेसन सेन्टर स्थापना गर्न महावीरको साथ मागेका छन् । सरकारले अघि बढाउन लागेको यो महत्वाकाङ्क्षी परियोजनालाई हाँक्न भट्टराईले महावीरलाई आग्रह गरेका छन् । महावीरले प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई इमेलमार्फत मिलेर अघि बढिने भनेर जवाफ दिएका छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 1:43 AM No comments:
नेपाली राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपको आरोप सनातनी हो । दक्षिण, उत्तर र पश्चिमी कुटनीतिको अखडा बनिरहेको नेपाल अन्तराष्ट्रिय मिडियाको पनि अखडा बनेको छ । वैदेशिक मामिलामा कुटनीति भन्दा पनि मिडियाको भूमिकालाई संवेदनशिल मानिन्छ । यतिबेला प्रधानन्यायाधीश प्रकरणको नेपाली राजनीतिलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय चासो जत्तिको बढेको छ, त्यति नै नेपालबारेको गलत समाचार बाहिर गैरहेको छ । आफूलाई प्रतिष्ठित दाबी गर्ने विदेशी मिडियाले नेपाली न्यूजलाई विदेशमै बसेर कभरेज गर्ने जसका कारण यहाँको यथार्थ नसमेटिने खतरा बढिरहेको छ । गार्डिनर ह्यारिसले मंगलबार न्यूयोर्क टाइम्सका लागि लेखेको समाचारप्रति धेरै नेपालीको असन्तुष्टि छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 1:03 AM No comments:
१९ फेव्रुअरी, २०१३
जब ओस्कर अवार्ड नजिकिन्छ, म प्रायः त्यसको प्रेडिक्सनमा लाग्छु । प्रेडिक्सनमा आधारित रहेर मैले कैंयन ब्लग लेखिसकेँ । तर, यसपटकको ओस्कर अवार्ड घन्टामा काउन्टडाउन सुरु भैसक्दा समेत त्यसको प्रभाव र धुकधुकी ममा बढ्न सकेको छैन । म मात्र होइन, सिङ्गो एसिया यसपटकको ओस्कर अवार्डलाई लिएर त्यति मुडी भैसकेको छैन । यस्तो लाग्छ –यसपटकको एकेडेमी अवार्ड युरोप र अमेरिकी पुरस्कारमात्र हो । हलिउडको ठूला बजार चीन र भारतमा समेत ओस्करको ज्वरो छैन । बरु, उनीहरू ज्याकी च्याङ र आङ लीको पिटर पार्करमै मजा लिइरहेका छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 1:07 AM No comments:
Obstarct Image by : Deepak's Facebook
दीपक सापकोटा, समकालिन पुस्ताका प्रखर कवि हुन् । यी तन्नेरी कवि वर्गीय समाजका बिब्ल्याँटा पाटा, प्रेम र सौन्दर्यलाई विम्वमा उतार्न खप्पीस छन् । उनी र म बीचको सम्बन्ध केवल पाठक र लेखकबीच सीमित छैन । उनी जे लेख्छन्, मन छुने गरि लेख्छन् । ‘दृष्टि’ साप्ताहिकबाट सुरु भएको हाम्रो उठ्वस् यतिबेला गतिमान छ । कैंयन महिना हामी पुतलीसडकको एउटै कोठामा बसेका छौं । उसो त हाम्रो सम्बन्ध तरकारीको स्वाद र भान्सासँग पनि जोडिएको छ । यसर्थ हाम्रो सम्बन्धको लम्बाइभन्दा गहिराई बढ्ता छ । मेरो एउटै आग्रहमा यी काभ्रेली रैथानेले कविता जन्माए र मलाई मेल गरिदिए । उसो त मलाई वर्गीय समाजको माक्र्सेली सौन्दयसँग ज्यादा अपनत्व छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 11:58 PM 1 comment:
Navin K Bhattarai in Sydney, Performing concert. Image : Facebook
१८ फेव्रुअरी, २०१३
नवीन के. भट्टराईलाई म गायक मात्र भनेर चिन्दिँन । केही वर्षअघि पुतलीसडकको कोर्टयार्ड क्याफेमा अन्तवार्ताका लागि कफी पिउँदै गर्दा उनी देशप्रति चिन्तित भएको पाएको थिएँ । मेरै जिल्लालाई उनले ससुराली बनाएका हुन् यसकारण अर्को किसिमको भावनात्मक सम्बन्ध पनि । यतिबेला अष्ट्रेलियाबाट पनि देशलाई सम्झिएका छन् । स्कुले जीवनमा म उनका गीत सुन्दै हुर्किएको पनि हुँ । दसवर्षअघिको जेनेरेसनमाझ संगीतको आफ्नै खाले ट्रेडमार्क बनाएका नवीनले यतिबेला नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् –‘इमान बचाऊ’ । यो मोन्टाज म्युजिक भिडियो सेलिव्रेटीको आग्रह हो । लगभग सबै कलाकार मायाप्रेममा अल्झिएका बेला इमान, स्वाभाविमान र स्वतन्त्रताको बिन्ती गर्ने नवीनको यो गीत प्रशंसनीय लाग्यो मलाई ।
Apex court of Nepal. Image : Myrepublica
टेक्नोक्र्याटलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सैद्धान्तिक सहमतिपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्समा पसेको छ । पञ्चायतकालपछि निर्दलीय सरकार बन्दैछ । सिङ्गो नेपाल प्रधानन्यायाधीश सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आउँदो जेठमा चुनाव गराउने गरि खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी अधिकार सुम्पिँदैछन् । प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा प्रजातन्त्र र दलको भूमिकाबारे बहस पनि सुरु भएको छ । सरकारको मोडल, चुनाव र प्रावधानमा सहमति जुटेपछि मात्र प्रमुख दलहरू औपचारिकरुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख घोषणा गर्दैछन् । कार्यदल सक्रिय छ र सम्भवतः सोमबार बेलुकासम्म कार्यदलले तयार पारेको निर्णयमाथि दलहरू सहमति गर्दैछन् । के–के कुरामा सहमति हुँदैछ ? कार्यदलले के काम गर्दैछ ?
Posted by Sharma Bishnu at 1:47 AM No comments:
१७ फेव्रुअरी, २०१३
न्यूयोर्कस्थित नेपाली फेसन डिजाइनर प्रवल गुरुङले आगामी वर्षायाम (फल)का लागि कस्ट्युम डिजाइन गरेका छन् । गतसाताको न्यूयोर्क फेसन सप्ताहमा उनले डिजाइन गरेका वार्डरोवलाई मोडलहरूले प्रस्तुत गरे । उक्त छेकोमा अन्य अमेरिकी फेसन डिजाइनरले फलका लागि आकर्षक डिजाइन पस्किएका थिए । तर, प्रवलको प्रस्तुति उक्त अवसरमा सबैको आकर्षणको विन्दु बन्यो । आशा गरौं –नेपालीले किन्न सक्ने मूल्यमा उनका डिजाइनहरू आफ्नै देश नेपालका सिभिल मल र भाटभटेनी सुपरमार्केटमा किन्न पाइयोस् । फेसनको विशेषता भनेकै सिजनअनुसार नयाँ वार्डरोव शैली पस्कनु हो । मुख्य कुरा त प्रवलको यो फेसन वीकमा मंगोलियन अनुहारका मोडलले फेसन डिजाइन लगाएर बिरालो चालमा हिँडे ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:46 AM No comments:
१६ फेव्रुअरी, २०१३
Award winning photo of world press photo award. Image- Time Magazine
उखानै छ –‘एउटा फोटोले बताउने कुरा शब्दले भन्न सक्दैन ।’ फोटो पत्रकारिताको यो प्रसिद्ध उखानले तस्विरको शक्ति र प्रभावलाई दर्शाउँछ । यसकारण युवापुस्तामा फोटो जर्नलिज्मको क्रेज र गल्यामर दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यसै पनि यो मौसम अवार्डको हो । संगीतको ग्रामी अवार्ड सकिएको छ भने फिल्मको सर्वोच्च अवार्ड ओस्कर आउँदो २४ तारिखमा हुँदैछ । आज (शनिबार) मात्र नेदरल्यान्डको आम्सटर्डममा विश्व प्रेस फोटो प्रतियोगिता अवार्ड गरियो । जहाँ स्वीडेनका फोटो पत्रकार पउल हेन्सन विजेता बने । तल राखिएका उत्कृष्ट तस्विरहरू मैले टाइम म्यागजिनबाट लिएको हुँ । आशा छ, मसहितका साथीहरूले यी फोटोबाट स्टोरी टेलिङ सिक्नुहुनेछ । यी फोटो सबै सन् २०१२ मा प्रेसमा प्रकाशित भैसकेका हुन् । सिरियामा खिचिएको तस्विर उत्कृष्ट भएको छ । कतिपय फोटोले तपाईंलाई हृदयविदारक तुल्याउन सक्छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 2:44 AM No comments:
Ulyana Horodyskyj is in USA
१५ फेव्रुअरी, २०१३
सगरमाथामा ‘जासुसी क्यामेरा’ राखिएको भन्ने हल्ला केही अघि नेपाली मिडियामा चर्चित बनेको थियो । नेपाली भूमि प्रयोग गरेर अमेरिकाले चीनको गतिविधि नियाल्न यस्तो क्यामेरा राखिएको भन्ने आरोप पनि यो कामविरुद्ध लगाइयो । ‘न्यूज ट्वान्टीफोर’ टेलिभिजनले यथार्थ नबुझी हावादारी ‘पावर न्यूज’ पनि बनायो । यतिबेला त्यहाँ क्यामेरा राखेकी अमेरिकी युवती उल्याना नादिया होरोडेस्की मेरो सम्पर्कमा आएकी छिन् । युनिभर्सिटी अफ कोलोराडोकी पीएचडी सोधकर्ता रहेकी नादियाले मलाई इमेल गरी हिमालय क्षेत्रको हिमनदीको बारेमा टाइमल्याप्स क्यामेराको माध्यमबाट अनुसन्धान गरिरहेको र यतिबेला क्यामेरा हटाउनुपरेको लेखेकी छिन् । आफूले गरेका अनुसन्धानका कारण र प्रोजेक्टलाई निरन्तरता दिनेबारे उनले यसरी लेखेकी छन् । उनको इमेल तल पढ्नुस :
Posted by Sharma Bishnu at 1:16 AM No comments:
दक्षिण कोरियाली चर्चित पप गायिका बेइक जी योङले नेपालका बालबालिकालाई सघाउन विद्यालय खोल्ने भएकी छिन् । यसका लागि उनले आउँदो आइतबार राजधानी सियोलमा सातवर्ष पछिकै पहिलो कन्सर्ट आयोजना गर्दै छिन् । कन्सर्टबाट उठेको पैसाले विद्यालय खोल्ने छिन् । उनी कन्सर्टमा व्यस्त भैरहेको बेला नेपालमा बालबालिकाका लागि योङले स्कुल खोल्ने खबर बाहिर आएको हो । यो समाचार शुक्रबार ट्वीटरमा उत्कृष्ट समाचार बनेको छ । पपगीतसम्बन्धी वेभसाइट एलेकपपले यो समाचार पहिलोपटक लेखेको हो ।
Posted by Sharma Bishnu at 2:31 AM No comments:
PM Baburam Bhattarai, Image : Google
नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने कुरो लगभग टुंगो लागिसकेको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजिनामाको मुड बनाउन क्याबिनेट सदस्यलाई भनिसकेका छन् । उनको सानेपास्थित पुरानो घर सफासुग्घर पारिएको छ । यति नै बेला भट्टराईले आफ्नो कार्यकालका १२ महत्वपूर्ण उपलब्धीलाई माइक्रोब्लगिङ साइट ट्वीटरबाट सार्वजनिक गरेका छन् । सेना समायोजन र काठमाडौंको सडक विस्तारलाई उनले महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लेखेका छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 1:52 AM No comments:
A beautiful Bhutanese kids with smile. Image: google
भुटान नेपालको एउटा पूर्वी छिमेकी राष्ट्र हो । प्रसिद्ध फोब्र्स म्यागजिनका अनुसार भुटानका नागरिक विश्वकै खुशिमध्येका हुन् । त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आम्दानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च छ । यतिबेला भुटानले जलस्रोतमार्फत समृद्धिको यात्रा हाँकिरहेको छ । राजनीतिक स्थिरता नै भुटानी विकासको सहायक हो । हाम्रो देश नेपालले भुटानबाट सिक्नुपर्ने धेरै छन् । हामी कहाँ राजतन्त्र विकासको अवरोध थियो तर भुटानमा राजतन्त्र साधक बनिरहेको छ । भारतीय ब्लगर तथा साथी विजया सिन्हाले हालै थिम्पुको भ्रमण गरी यी तथ्य संकलन गरेका थिए ।
Posted by Sharma Bishnu at 1:20 AM No comments:
१४ फेव्रुअरी, २०१३
नेपाल र अमेरिकाबीचको दूरी १६ घण्टे हवाइ उडानमा मात्र सीमित छैन । पछिल्लो समय दुई देशबीच सांस्कृतिक अनुभव साटासाटको घनिष्ठता बाक्लिएको छ । विश्व फिल्मको केन्द्र हलिउड र पहिचानका लागि संघर्ष गरिरहेको नेपाली फिल्मले एकअर्काको नाडी छाम्न थालेका छन् । हलिउड सेलिव्रिटी नेपाल आउँछन् र नेपाली सेलिव्रिटी लस–एन्जल्स जान्छन् । हलिउड नेक्सस नेपालको यो आयामबाट काठमाण्डूले भने फाइदा लिन सकेको छैन ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:26 AM No comments:
तपाईं हामी यतिबेला भ्यालेन्टाइन मुडमा छौं होला । कतिपय राजनीतिक अस्थिरता र करियरको चिन्ताले चिन्तित पनि होऔंला । तर, नेपालकै मिहेनती युवाहरूको एक समूहले भ्यालेन्टाइन डेकै मेसोमा रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । कतिपयलाई यो समाचार सस्तो र वाहियात लाग्न सक्छ, तर यो यथार्थ हो । सरकारले समेत यसमा सघाएको छ । समाचार पढौं ।
Posted by Sharma Bishnu at 10:48 PM No comments:
१३ फेव्रुअरी, २०१३
A Tibetan monk doused himself in petrol inaKathmandu restauran. Photo- AP
चिनियाँ राजदूत याङ होउलान मुस्ताङबाट फर्किएको भोलिपल्टै ३१ वर्षका थेन्डुप गोप्चेले बौद्ध स्तुपामा आफैलाई जलाउने प्रयास गरे । यो ब्लग लेखिरहँदा उनी चिन्ताजनक अवस्थामा छन् । सन् २००९ देखि सुरु भएको तिब्बती भिक्षुहरूको आत्मदहनको एकसय संख्या पुरा हुन लागेको बेला यो घटना भएको बताइएको छ । आगामी मार्च १० मा चीनले तिब्बती धपाएको अर्को वर्षगाँठ पुग्दै गरेको बेला यो घटना भएको छ । स्रोतका अनुसार चीनले यो आत्मदहन प्रयासको घटनालाई गम्भिररुपमा लिइएको छ । यतिसम्म खबर आएको छ कि भर्खरै म्यानमारमा पोस्टिङ गरिएका राजदुत होउलानको काठमाडौं कार्यकाललाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 3:04 AM No comments:
उपभोक्ताहरूले ट्वीटर र फेसबुकबाट मूल्यवृद्धिको विरोध गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीट गर्दै ‘तत्कालका लागि दोहोरो मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइएको’ बताए । आफूले मूल्यवृद्धि घोषणा गरेको २४ घन्टा बित्न नपाउँदै भट्टराईले जोकपूर्ण फिर्ता लिए । विपक्षी दल सम्वद्ध ११ विद्यार्थी संगठनले राजधानीका ठाउँठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्दा यातायात अस्तव्यस्त हुनपुग्यो । जसै भट्टराईले ट्वीट गरे आगोसरी खबर फैलियो र जुलुस तितरबितर भैगयो ।
Posted by Sharma Bishnu at 2:11 AM No comments:
खिलराज बन्दैछन् चिफ एक्जुकेटिभ, प्रधानमन्त्री होइन
Chief Justice of Nepal : Khilraj Regmi
१२ फेव्रुअरी, २०१३
बहालवाला मुख्य न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुराको नजिक दलहरू पुगेका छन् । तर, उनी प्रधानमन्त्री हुने कि चिफ एक्जुकेटिभ भन्नेबारे सहमति जुटेको छैन । प्रधानमन्त्रीमा प्रधानन्यायाधीशको सैद्धान्तिक सहमति भएपनि त्यसअघि उनलाई राजिनामा गराउने कि नगराउने भन्नेमा विवाद छ । माओवादी राजिनामा नगराइकनै अघि जाने र विपक्षीहरू राजिनामा गराएर अघि बढ्ने मुडमा छन् । विपक्षीहरू न्यायालय र कार्यकारी शक्ति एउटै व्यक्तिमा निहित गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिने डरमा छन् । माओवादी व्यक्तिभन्दा पनि संस्थालाई कार्यकारी अधिकार दिन लागिएको तर्कमा छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:33 AM No comments:
Apple product Iphone5: Image-Google
सूचना प्रविधिको कुम्भ मेला मेरो ह्याङआउट अवसर रह्यो यसपटक । क्यान इन्फोटेकमा म वर्षेनी सहभागि रहेर नेपाली समाज र सूचना प्रविधिलाई नियाल्ने गर्छु । त्यो साइवर–टेक्नो पुस्ताको भीडमा म हराएँ । ल्यापटप र मोबाइलका आधुनिक भर्सन, थ्रीडी टेलिभिजन, ऊर्जाका वैकल्पिक उपकरणले थिचेको उक्त भव्य मेलाको सफलता वा असफलताको परख हुँदै गर्ला तर, प्रविधि उपभोक्ताको बढोत्तरीले नेपाली समाजको आधुनिकतालाई हर्लक्कै बढाइदिएको छ । आधुनिकताका दुईटा पिलरमध्ये सूचना प्रविधिको पहुँच वास्तवमै बढेको छ । हातहातमा मोबाइल र इन्टरनेटले दिलाएको संचार वास्तवमै अभूतपूर्व छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 11:46 PM No comments:
म साक्षी छु अर्थात भ्यालेन्टाइन अर्थात नेपाली सन्दर्भमा एउटा नूतन परम्परा कथाको । आउँदो बृहस्पतिबार, तदनरुप फागुन २, २०६९ । नेपाली क्यालेन्डरअनुसार यो कुनै खास पर्व वा पवित्र दिन होइन । तैपनि, विशेषतः सहरी किशोर/किशोरी, युवा युवती त्यस दिनको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । त्यो दिन अंग्रेजी क्यालेन्डरअनुसार फेव्रुअरी महिनाको १४ तारिख हो । अर्थात भ्यालेन्टाइन डे, नेपाली नामाकरण चाहिँ प्रेम दिवस रे ! तसर्थ म युवापुस्ताको व्यग्रताको अनुमान गर्न सक्छु । खासमा भन्नुपर्दा केही फ्ल्यासब्याकको झड्काले म स्वयं तरंगित हुन्छु र स्मृतिदशंले थोरै घाइते हुन्छु पनि ।
Posted by Sharma Bishnu at 11:06 PM No comments:
११ फेव्रुअरी, २०१३
Pop divas in Grammy red carpet : AP
अन्ततः मम्फर्ड एन्ड सन्स ब्यान्डले यसपटकको ग्रामी अवार्ड जितेको छ । विश्व संगीतको सर्वोच्च अवार्ड आज (सोमबार) विहान लस–एन्जल्समा बाँडिएको थियो । दोस्रो एल्बम ‘बेबेल’बाट उक्त ब्यान्डले सबैलाई चकित पार्दै अवार्ड पोल्टामा पारेको हो । गायिका एडेलको हातबाट अवार्ड लिँदै लिड गायक मार्कस मम्फोडले जितले आफू छक्क परेको बताए । ‘हामी जित्न गइरहेका थिएनौं र परिणाम हाम्रो पक्षमा आयो’ हौसिँदै उनले भने ।
Posted by Sharma Bishnu at 1:34 AM No comments:
ललितपुर भन्ने ठाउँ नेपाल हो । म त्यहीं ठाउँमा बस्छु । तर, ललितपुर यस्तो पनि ठाउँ हो –जहाँका नीजि स्कुल पढ्ने विद्यार्थीलाई नेपालभन्दा पश्चिमा क्रिस्चियानिटीको चासो हुन्छ र भारतीय राष्ट्रिय चिन्हहरूको ज्ञान हुन्छ । यहाँका ७० प्रतिशत नीजि स्कुलको नाम बाइबलबाट राखिएका छन्, इसाइ बिदामा छुट्टी दिइन्छ र नेपालमा बस्नेबाहेक उनीहरूलाई नेपाल कुन चरीको नाम हो पत्तो हुँदैन । आज (आइतबार) ललितपुरका सबै शिक्षण संस्था बन्द छन् । वैद्य माओवादी निकट शिक्षक र विद्यार्थी संगठनले विदेशी पाठ्यक्रमविरुद्ध बन्द आह्वान गरेका हुन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:44 AM No comments:
Posted by Sharma Bishnu at 12:04 AM No comments:
९ फेव्रुअरी, २०१३
न्यूयोर्क फेसन सप्ताहमा तपाईं प्रतीक्षित बन्नुभएको थियो । तपाईंप्रति सिंगो विश्वकै आकर्षण किन ?
यो विलियन डलरको उद्योग हो जसको प्रभाव देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पर्छ । मैले ९८ प्रतिशत डिजाइन न्यूयोर्कमै रहेर गरेँ र यहीं मैले रोजगारको सिर्जना गरेको छु । फेसन ग्ल्यामर मात्र होइन, यसको गहिराइलाई मैले राम्रोसँग बुझेको छु ।
Posted by Sharma Bishnu at 2:23 AM No comments:
स्कुल जीवनदेखि नै प्रिय गायक थिए सुगम पोखरेल । गायकीबाहेक गतिलै चिनजानले पनि प्रिय थिए उनी मेरा । इतिहास अक्सर दोहोरिन्न तर दोहोरियो भने निर्मम ढंगले दोहोरिन्छ । यो मान्यता यतिबेला यी पप गायकको जीवनमा दोहोरिएको छ । लागुऔषधसहित सुगम दोस्रोपटक प्रहरीद्धारा पक्राउ परेका छन् । पहिलोपटक पक्राउ पर्दा उनी सांगीतिक करियरको उत्कर्षमा थिए र निकै रोइ–कराईपछि प्रहरीले उनलाई गल्ती सच्याउने सर्तमा छाडेको थियो । उनै सुगम हुन् जो लागुऔषध मामिलामा पुनः पक्राउ परेका छन् र असंख्य फ्यानहरूको चित्त दुःखाएका छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 1:01 AM No comments:
जेनी लिङ/लोन्ली प्लानेट
८ फेव्रुअरी, २०१३
सन् १९२० बाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा मानव चहलपहल सुरु भएको हो । तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा, एड्मन्ड हिलारी, जर्ज म्यालोरी लगायतले चुचुरोमा पाइला टेकेका थिए । आरोहणका दौरान हजारौंले उनीहरूको आरोहणकलालाई पछ्याए, थुप्रैले हिउँसँग जीवन साटे । तर, हिजोआज जीवनको खोजी गर्दै हिँड्ने र सगरमाथा चढ्नेका लागि त्यसको आधार शिविर जीवनमा पुग्नैपर्ने सपनाको थलो बनेको छ । २०१२ मा ३५ हजारदेखि ३७ हजारसम्मले सगरमाथा क्षेत्र घुमे ।
‘ठूला विपक्षी दलको खुलामञ्चमा जारी ‘शक्ति प्रदर्शनमा देखिएजति मान्छे त QFX का हरेक सोबाट बाहिर निस्किन्छन् । खुलामञ्च जाऊँ, विपक्षीको बिजोग प्रदर्शन हेरौं ।' –लेनिन बञ्जाडे (फेसबुकमा)
यो स्टाटसले मलाई केही घोत्लिन बाध्य पारिदियो । विपक्षी दलले टुँडिखेलमा एकलाख मानिस उतार्ने खबर पढेको थिएँ । उनीहरू सरकारलाई घुँडा टेकाउने भन्दै आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रित गर्ने भनिरहेका थिए । तर, एकलाख त के आठ दल र रत्नपार्कमा बदाम खान पुगेकाको संख्या जोड्दा पनि दसहजार पुगेन कि ? यस्तो लाग्यो, उक्त स्टाटसले भनेजस्तै विपक्षीको शक्ति प्रदर्शनभन्दा क्यूएफएक्सका हरेक सो खचाखच हुन्छन् र उनीहरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मुद्दामा भन्दा जोन अब्राहम र दीपिका पादुकोणको ‘रेस २’ हेर्नुमा मजा लिन्छन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 12:42 AM No comments:
७ जनवरी, २०१३
एनेकपा माओवादीले प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई स्वतन्त्र प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेपछि राजनीति पुनः तरंगित भएको छ । हेटौंडामा जारी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो फर्मुला अघि सारेका हुन् । महाधिवेशन उद्घाटनमा उनले विपक्षीले यो सूत्र नमाने जनताले कार्वाही गर्ने बताएका थिए । कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतासँग भएको टेलिफोन वार्तामा प्रचण्डले यसबारे कुरा भएको र सहमति हुने संकेत दिएको उनले बताए । टेक्नोक्र्याटहरुलाई अघि सारेर देश चलाउने गरेको विदेशी अनुभव पनि छ । दलिय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणालीमा टेक्नोक्र्याट नेतृत्वले कसरी देश हाँक्नेछ, भविष्यले बताउनेछ ।
Posted by Sharma Bishnu at 4:13 AM No comments:
५ फेव्रुअरी, २०१३
थेचारिदै र पच्छारिदै
कहिले काहि दौडीनछन्
फुत्कन खोज्दै छन्
उनीहरु अस्तिवको खोजिमा
Posted by Sharma Bishnu at 11:38 PM No comments:
'नमस्ते ! तपाईँ आराम हुनुहुन्छ ?' हालैको एक गोधुली साँझ ठमेलको मण्डप क्याफेमा भेटिएका अमेरिकी तन्नेरीहरु ट्रेभर वालेस र डेना एड्वार्डस ब्रोकन नेपाली बोल्दै थिए । नेपाल बस्न थालेको नौ सातामै यी गोरा तन्नेरीहरु फाट्टफुट्ट नेपाली बोलेर नेपाली माया दर्शाउँदै थिए । यो अन्तरालको नेपाल बसाईमा यी गोराहरुले सुदूरपश्चिमको दार्चुलादेखि सर्वोच्च शिखर मुन्तिरको कालापत्थर नापे । सोलुखुम्बुको जीवनशैली छामे, स्थानीयको हार्दिकता बटुले र कहिल्यै नमेटिने नेपालीपनको अनुभव बटुले । वास्तवमा उनीहरु नेपाली कथाको फिल्म खिच्न हिमालयको देशमा आइपुगेका थिए । विदेशी दातृ संस्थाहरु र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले लगानी गरेका नेपाली जलविद्युत र माइक्रोहाइड्रोले अमेरिका छँदै यी तन्नेरीको मन खिचेको थियो । त्यसको वर्षौंपछि उनीहरु डकुमेन्ट्री खिचेर विश्वबजारका फिल्म फेस्टिभलमा चर्चा दिलाउन नेपाल आइपुगे ।
Posted by Sharma Bishnu at 11:12 PM No comments:
६ फेव्रुअरी, २०१३
हाम्रो राजधानी काठमाडौं उल्टोबाट चौंथो सस्तो सहर बनेको छ । इकानोमिस्ट इन्टिलेजेन्स युनिटले सार्वजनिक गरेको वल्र्डवाइट कस्ट अफ लिभिङ सर्भेमा दक्षिण एसियाली चार सहर सबैभन्दा सस्तो पाइएको हो । नम्बर एकमा जापानको राजधानी टोकियो छ । जापानी मुद्रा येनको लगातार खस्कँदो मूल्यका बाबजुद पनि टोकिया महंगो सहर बनिरहेको सीएनएनले लेखेको छ । जापानकै ओसाका सहर दोस्रो महंगो बनेको छ ।
‘काठमाण्डू : मिरर इन द स्काइ’सँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध छ । यो फिल्म जसमाथि बनेको हो, ती स्पेनिस महिलासँग गतिलै चीनजान छ । प्रहरीद्धारा निर्घात कुटपिट गरिएपछि नर्भिक अस्पतालको वार्डमा उपचार गराइरहेकी उनै भिक्टोरिया सुविरानासँग तीन वर्षअघि मेरो पहिलो भेट भएको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा फैसला ग¥यो र स्पेनले फिल्म बनायो । म जतिबेला ‘यो साता’ साप्ताहिकमा काम गर्थेँ । अहिलेपनि उनी भिक्टोरिया आफ्ना पति, नेपाली कानुन र यहाँको सिस्टमसँग लडिरहेकी छिन् । ग्राजुएट गरेका उनका छोराछोरी अहिलेपनि नागरिकताविहिन छन् । स्पष्ट भन्नुपर्दा, जति नजिकबाट मैले भिक्टोरियालाई चिनेको थिएँ, उति नै भिक्टोरियामाथ बनेको यो फिल्मले ममा कुनै प्रभाव पार्न सकेन । किनभने स्टोरी टेलिङ भनेको पृथक कुरा हो ।
Posted by Sharma Bishnu at 11:39 PM No comments:
तीनदिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका विश्व चर्चित जादुगर निकोलस ट्वीडीले काठमाडौंमा पनि आफ्नो जादुगरी देखाएका छन् । अनौठा जादुमयी कला देखाउन सक्ने, अर्कैको मस्तिष्क अध्ययन गरेर थाहा पाउन सक्ने र आगोलाई कलाको रुप दिन सक्ने खुबीले विश्वचर्चित ट्वीडी मंगलबार लस–एन्जल्स फर्किएका छन् । अष्ट्रेलियामा जन्मिएर विभिन्न टेलिभिजन सोबाट रातारात चर्चित ट्वीडीलाई विश्वचर्चित मेन्टालिस्ट/म्याजिसियनका रुपमा चिनिन्छ । कसैलाई थाहा नदिइकन नेपाल आएका उनले स्वयम्भुनाथ, पशुपति र बौद्धजस्ता पर्यटकीय थलो पनि घुमघाम गरे ।
Posted by Sharma Bishnu at 10:50 PM 1 comment:
आउँदो फेव्रुअरी १५ का दिन खगोल क्षेत्रमा महत्वपूर्ण घटना हुँदैछ । १५० फिट ब्यास र फूटबल मैदानको आधा क्षेत्रफल ओगट्ने एस्टेरोइड पृथ्वीमा खस्दैछ । नासाका अनुसार भ्यालेन्टाइन डे लगत्तै पृथ्वीमा खस्ने उक्त एस्टेरोइडले अन्तरिक्षमा रहेका स्याटेलाइमा क्षति पुर्‍याउने छ । यो महिनाको अन्त्यमा पृथ्वीको नजिक आइपुग्ने उक्त चट्टानको डल्लोले पृथ्वीमा भने क्षति नपु¥याउने दाबी नासाले गरेको छ । पृथ्वीबाट १७ हजार २०० माइल्स नजिक आइपुगेपछि यो एस्टेरोइडले स्यालेटाइटमा ठक्कर खानेछ । जसका कारण कतिपय देशको संचार सम्पर्क समेत अवरुद्ध हुने जनाइएको छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 10:11 PM No comments:
४ फेव्रुअरी, २०१३
तपाईं महिला हुनुहुन्छ र बस चलाउन सिक्नुभएको छ भने खुशिको खबर छ । यही महिनाबाट पुनः चल्न थालेको सरकारी साझा यातायातले महिला चालक र महिला खलासी राख्ने भएको छ । साझा चल्ने भएपछि २० वटा टाटा ब्रान्डका गाडी राजधानी आइपुगेका छन् । रत्नपार्क र पुल्चोकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर चल्ने साझालाई महिला चालक र परिचालिका चाहिएको विज्ञापन आज (सोमबार)को कान्तिपुरले छापेको छ । यातायातका म्यानेजर महेन्द्रराज पाण्डेयले मध्य फेव्रुअरीबाट साझा यातायात चलाउन लागिएको बताए । ‘हामीले विशेषगरी महिला चालक र खलासीलाई ग्राहयता दिनेछौं’ उनले भने, ‘महिला सशक्तीकरण, रोजगारी र लैंगिक समानताको मुद्दालाई तपाईंले साझा यातायातमा पाउनुहुनेछ ।’ साझा यातायातले यात्रुको सुविधाका लागि टिकट पनि बाँड्ने भएको छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 2:58 AM No comments:
‘जितु : त्यसो भए तिमीले मेरो एउटा काम गर्नुपर्छ ।
सुमी : के–के काम (काम्दै) ? म जे पनि गर्न तयार छु । ओठ सुकेको छ । गला सुकेको छ । जितुले आफ्नो सर्ट र चेन खोल्छ । सुमीले एकछिन सोच्छे र फेरी दुई हातले समातेर सक् गर्न चाहन्छे । जितु मस्तीले... '' फिल्म ‘वार’को स्क्रिप्ट संवाद हो यो । अश्लिल भन्दै चलचित्र विकास बोर्डले ‘वार'सहित ‘नाइन ओ क्लक’ र ‘डर्टी लभ’लाई निर्माण इजाजत दिन यसअघि अस्वीकार गरेको थियो । ‘थ्री लभर्ज’को चुम्बनलाई बोर्डले चार सेकेन्डमा सीमित गरेको छ । यस्ता सिनेमालाई नियमन गर्ने भन्दै स्क्रिप्ट सेन्सर थालेको बोर्डले पत्रकार जमघट गरी उक्त फिल्मको स्क्रिप्ट सार्वजनिक गरेको थियो । जहाँ श्लिलता र अश्लिलताको पक्षमा चर्को वादविवाद भयो । ‘वार’को उक्त स्क्रिप्टलाई खुलेरै कसैले पनि वाचन गर्ने आँट गरेनन् ।
Posted by Sharma Bishnu at 1:28 AM No comments: